राज्यकोषमा लुट : बद्नाम फ्रान्सेली कम्पनीसँग विना टेण्डर मध्यरातमा २ अर्बको सम्झौता ! ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
राज्यकोषमा लुट : बद्नाम फ्रान्सेली कम्पनीसँग विना टेण्डर मध्यरातमा २ अर्बको सम्झौता !
By नेपाली कान्छा on 8:02 PM | nepali news, nepalnews, नेपाली खबर, समाचार | No comments
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकारहरुले राज्यकोषमा लुट मच्चाउन थालेका छन् । एकपछि अर्काे आर्थिक घोटाका काण्डहरु बाहिर आउने क्रममा पछिल्लो समय फ्रान्सेली कम्पनीलाई विना डेण्डर १६ मिलियन अमेरिकी डलर दुई अर्ब नेपाली रकमको ठेक्का दिइएको छ ।
एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार फान्सेली कम्पनीलाई मध्यरातमा २ अर्बको ठेक्का दिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले मध्यराति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति सम्झौता भएको बताए । परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केहिसमयअघि आइडेमियासँग छलफल र ठेक्का सम्झौता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन र फान्सेली कम्पनीलाई विना डेण्डर ठेक्का दिन प्रधानमन्त्री ओलीका एक वरिष्ठ सल्लाहकारले निकै ठुलो भूमिका खेलेका थिए । बदनाम फ्रान्सेली कम्पनीलाई २ अर्बको ठेक्का दिलाएबापत उनले कति रकम हात पारे त्यो भने भविश्यमा थाहा होला ।